1. Iilekese ezintle ezimibalabala Ukutyeba okutyebileyo Ngezithako ezahlukeneyo Kodwa xa zidityanisiwe kunye, sithetha ngefudge. Imenyu abantu abaninzi abanokucinga ukuba kunzima. Kwaye andifuni ukuthatha umngcipheko Kodwa yithathele ingqalelo, kulula ukwenza imenyu. Ayifuni kwaye inzima Yimuncumuncu apho abantwana kuya kufuneka batye kwaye batye kwakhona ngaphandle kokudika. Emva koko, yizani sonwabe kunye. Kunye nendlela yokwenza i-fudge enokwenziwa nangubani na.Ngokwenyani, i-fudge dessert ene-crispy texture ngaphandle nangaphakathi ethambileyo Ngomxube wetshokholethi kunye nobisi Unokubizwa ngokuba kukutyiwa kwetyiwa, ukubonakala kokuthambeka komdaka Oku kuya kukunika incasa ethambileyo kwaye egudileyo, efihliweyo ngencasa yetshokholethi emnandi, kunye nefudge yokwenyani, akukho nkqubo inzima kunye nezithako. Yidayisi esithandwa ngabantwana kwaye bayithanda kakhulu. Emva koko, masilungiselele izithako. Izithako ezilula kunye nezixhobo, kodwa incasa iyamangalisa.
2. UFudge loluphi uhlobo lweedessert ngokuchanekileyo? Itoti enye yobisi olunencindi yobisi (14 oz)
3. Iikomityi ezi-3 zeMilko yetshokholethi yobisi
4. Tshiza ngeoyile yemifuno okanye ibhotolo
5. Izitya zokwenza ukhamba
6. Itreyi yetshokholethi
7. Iphepha likaFreud
8. Uyenza njani i-fudge, iswiti, isincamathelisi esincangathiweyo. • Galela ubisi olunencasa esityeni esityeni esilungisiweyo. • Emva koko faka iiChips zobisi ezityiweyo kwisitya. Ifakwa kwimicrowave kushushu kakhulu Ithatha malunga nemizuzu e-1. • Sika iphepha leFreud kwitreyi yokulungiselela i-pastry. Emva koko tshiza ioyile yemifuno okanye uthambise ibhotolo encinci engenasityu. Ukuze itshokholethi ingabambeleli kwi-freud ukuze kube lula ukuyisusa.
9. • Emva koko ugalele itshokholethi kwipani elungisiweyo okanye kwisikhunta. Sebenzisa i-ladle ukusula ubuso ngokugudileyo. Emva koko beka lo mxube kwisikhenkcezisi kangangeeyure ezi-2 de ube umile ngokupheleleyo.
10. • Xa usenza ifriji iiyure ezimbini, susa kwisikhunta. Emva koko ukhutshwe, usikwe kwimivalo yesikwere, okanye usike iziqwenga ezilumkileyo xa unikwa iswekile yokubhabha. Okanye i-sugar flake encinci Ukwenza incasa emnandi, yibeke ngaphezulu komsinga. Yinto emnandi nje le, iFudge kukutya okungalungiselelwa ipati kwangaphambili. Kuba inokugcinwa kwifriji Ingakumbi kwimibutho enabantwana okanye njengesitya esimnandi emva kwesidlo sangokuhlwa. Oko kuthathwa ukuze kube lula ukukhonza kunye nencasa emnandi Okanye ukulungiselela iindwendwe ngexesha lekofu kunye neeseshoni zeti, ezihambelana phantse nazo zonke iintlobo zeziselo ezishushu Ukongeza, ukukwazi ukuyenza ngokwakho unokongeza ubumnandi kunye nezibonelelo ezivela kwiinkozo ezipheleleyo, amandongomane okanye iziqhamo ezomisiweyo. Yenze ibe ngumphunga owahlukileyo kwizinto ezijikelezileyo, emva koko masenze umjelo kwifriji yeendwendwe okanye amaqela !!